खुशीका साथ बाँच्न चाहनुहुन्छ ? त्यसो भए यसो गर्नुस्
२३ भदौ, काठमाडौँ । खुशी भनेको जीवित जीवनको चरम आनन्द , प्रफुल्लित क्षण, अनुहारमा क्रान्ति र मनमा शान्तिसहितको क्षण नै खुशी हो ।अहिलेको संसारमा प्राय मानिस खुशीसाथ बाच्न सकिराखेका छैनन् । खुशीका साथ बाच्ने चाहना त सबैको हुन्छ तर पनि चाहँदा चाहँदै पनि हामी सधै खुशी भएर बाँच्न सक्दैनौं । खुशी कसरी हुने त ?
मुस्कान : मुस्कानले मानिसलाई खुशी बनाउँछ । मुस्कानले सधै सकारात्मक चिन्तनका साथ अघि बढ्न पनि प्ररित गदर्छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार मुस्कानले मानिसलाई ऊर्जाशील बनाउँछ । मुस्कानले केही मात्रामा भए पनि हाम्रो पीडा कम गराउँछ । मनोविद्हरुका अनुसार पनि जब आनन्द महसुस हुन्छ खुशी प्राप्त हुन्छ ।
धन्यवाद भन्ने गरौं र आफूले पनि महसुस गरौंः आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रत्येक दिन एक जनालाई धन्यवाद व्यक्त गरौं यसले गर्दा हाम्रो मस्तिष्कलाई सकारात्मक बनाउँदै लैजान्छ । यसले गर्दा पनि हामीमा खुशी प्राप्त हुन्छ । र आफूले पनि धन्यवादको महसुस गर्ने गरौं।
आफैलाई साथी बनाउने: यदि हामीले आफले आफैंलाई साथी जस्तै बनाउन सक्यौ भन लुकेका खुशीहरु स्वतः बाहिर आउँछन् । हामी जसरी आफ्ना साथीको गल्तीलाई माफ गर्दिन्छौं उसप्रती सहृदयी हुन्छौं त्यसैगरी हामी आफ्नो लागि पनि सहृदयी र उदार बन्न सक्छौ यसले गर्दा हामीलाई जस्तो बेलामा पनि एक्लोपन महसुस हुँदैन । जसले हामीलाई खुशी राख्दछ ।
अरुलाई सहयोग गर्ने : अरुलाई सहयोग गर्दा पनि खुशीप्राप्त हून्छ । तपाईको सानो सहयोगले अरु कसैको ठूलो काम बन्न सक्छ र अर्काे व्यक्ति खुशी हुन्छ हो त्यही खुशीमा पनि तपाईलाई आनन्द प्राप्त हुन्छ त्यसैले पनि तपाईले आफ्नो ठाउँबाट अरुलाई सक्दो सहयोग गर्ने बानी बसाल्नुस् ।
अरुलाई बदल्ने कोसिस नगर्नहोस् : यो आवश्यकता छैन कि सबै मानिस तपाई जस्तै हुन् । जीवनमा विभिन्न मानिसहरुसँग भेट हुन सक्छ जसको व्यवहार तपाईसँग मिल्दैन वा तपाईलाई उसले नराम्रो व्यवहार गर्छ त्यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिने गर्नुस् । उनीहरुलाई त्यस्तै रहन दिनुस् । बदल्छु भन्ने विचार मनमा नल्याउनुस् । सकारात्मक सोचमा पनि खुशी प्राप्त हुन्छ ।